Kungani sinezinyosi ezilahlayo futhi siwisa amazinyo? Ukubaluleka kwengqondo
Iyini iphupho lapho unayo izinyo ezithintekayo?
Ngeshwa, imvelo ayizange ibone ukuthi amazinyo amasha azokhula emazinyo ethu. Ngakho-ke, ngisho nasephusheni izidingo zokuqala zokuthi singakwazi ukulahlekelwa izinyo ezivele zibangele ukuphazamiseka nokukhathazeka. Kodwa ingabe kunesichazamazwi esibi kakhulu, njengalesi sakhiwo sokulala? Kungani izinyo ezithintekayo noma amaqembu wonke ephupha nhlobo? Izincazelo kulephupho ungathola ngezansi. Masinyane ukuxwayisa, empilweni yangempela ukumamatheka kwakho akusekho engozini.
Yini ongayilindela esikhathini esizayo, uma uphupha ngokuthi izinyo lizama kanjani?
Uma ingqondo yakho ivakashele iphupho lapho uzizwa khona ukuzulazanyiswa kwezinyo noma eziningana ngesikhathi esisodwa, khona-ke lesi sibonakaliso singachazwa ngezindlela ezihlukahlukene. Konke kuxhomeke kubulili bakho, luhlobo luni izinyosi, indlela ozizwa ngayo ngesikhathi esifanayo. Ngokuvamile, lesi sithombe sokulala sivame ukuxwayisa mayelana nokuwohloka kwezempilo okuseduze, mayelana nokuthi yini okudingeka ikhokhwe. Ngaphezu kwalokho, emva kwalokhu iphupho kukhona ingozi yokuba yingxenye ye-DPT. Akunakucatshangwa ukuthi uthole ngemuva kwesondo, ngisho noma ungumshayeli onolwazi futhi othembekile. Uma ephusheni wonke amazinyo ayengaqinile, bese ulindela izenzakalo ezizoletha ukwesaba nokungaqiniseki ekuphileni okujwayelekile okuthulile esikhathini esizayo esiseduze.
Mhlawumbe, isibonakaliso esinjalo singase sibonise ukuthi ubhekene nokukhetha okubaluleke kakhulu, kodwa ungaqapheli ukunquma. Ngendlela, uma ephusheni umcibisholo ophezulu wangaphambili uphazamisekile, khona-ke lokhu kungabonisa ukugula okusheshayo kukayihlo, ophansi - kunesibopho somama. Ngendlela, ngokusho kwencwadi yephupho kaFreud, ukuphikisana ne-incisors kungabonisa ukwesaba okukhulu kokulahlekelwa umuntu oseduze.
Kwabesifazane, isithombe esinjalo sokulala singasho ubuhlobo obungaphephile nobunzima nomuntu akhethiweyo. Uma izinyo ekugcineni zaphuma - zithembisa ukuhlukanisa. Uma owesifazane okhulelwe ephusheni engamazinyo avulekile, kusho ukuthi ingane iyoba neurotic futhi ingenakuphumula.
Ukuzwa ubuhlungu ephusheni kuwuphawu lwezinyembezi. Ungase ube nobudlova, ukhohlisiwe noma ucasuke, noma kunjalo, ngokushesha ngemva kokulala, uzokhala kakhulu.
Iyini izinyosi ezifikayo zamadoda eziphuphayo? Ngokuvamile, lesi sithombe sifika esikhathini lapho impumelelo yebhizinisi iqala ukwehla. Futhi leli phupho ligcwele izinto ezingabalulekile, kodwa ukulahlekelwa okungajabulisi, ukulimala kwempahla. Kungase kube khona ukungqubuzana nabalingani noma abaphathi. Inkulumo esho ngokunganaki ingakwazi ukukuphazamisa phakade kusuka kumuntu.
Iyini izinyo ezithintekayo negazi eliphuphayo?
Ngokwalo, igazi ephusheni liwuphawu lokuhlangana nomndeni noma abangane abahle. Kodwa njengoba indaba yangaphambilini ingeziwe kuloluphawu, lo mphupho uzovakashela isihlobo esigulayo noma umngane. Uma ngabe unethuba lokuxubha amazinyo akho ephusheni, uzizwe ukuthi liyigazi elimangalisa futhi ligaye ngesikhathi esifanayo, lokhu kuyisibonakaliso sosizo kumuntu othandekayo. Kungenzeka ukuthi lo muntu uzodinga ukusekelwa ngokwezimali nokuziphatha ngenxa yokulimala okubukhali empilweni, ngesifo noma enhlekeleleni.
Ukuchazwa kwamaphupho mayelana nezinyosi ezivame ukuvame ukuhambisana nemvelo yethu eseduze, kanye nempilo yethu. Ngakho-ke, isakhiwo esinjalo senza umuntu acabange ngalezi zici ezibalulekile zokuphila. Ungayinaki lesi sibonakaliso futhi konke kuzoba kuhle!
Kusho ukuthini uma befuna ukubulala ephusheni?
Isobho elimnandi ngamakhowe kanye nesilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi
Inkukhu igaye ngemifino
Ingabe ukugeza kwansuku zonke kwengane kuyasiza?
Ikhompyutha nezingane zasenkulisa
Yini okufanele ugqoke isiketi ebusika: izithombe ezingu-9 ezivelele kakhulu
Indlela yokukhulisa uthando lomntwana ezweni lakhe
Ukuthuthukiswa kwamazinyo ekudleni okungenamsoco ezinganeni
Izinkumbi zenkomo ewayini
Izingane ezineminyaka engu-13 kuya kwengu-22 ubudala
Ukudla okuphumelelayo i-Protasova